Maoko Chete CPR - Prairie Cardiovascular
Maoko Chete CPR Kudzidziswa
Steve Pace paakadonha pasi, mudzimai wake Carmen akaridza nhare 9-1-1 uye akabva atanga kutsikirira chipfuva. Anga asina chokwadi chekuti aishandisa nzira chaiyo, asi vanachiremba, vanamukoti uye vekutanga vanopindura vanobvuma kuti kukurumidza kwake kwakaponesa hupenyu hwaSteve, kumuchengeta ari mupenyu kusvika amburenzi yasvika.
Tichifemerwa nenyaya yekukasira kufunga kwaCarmen, timu yePrairie Heart Institute yakatanga dzidziso ye “Keeping the Pace – Hands Only CPR” kuti iunze nzira yekuponesa upenyu iri nyore kunharaunda.
Hands Chete CPR inokurudzirwa neAmerican Heart Association kune vanomira vasina kudzidziswa muCPR. Inokurudzirwawo kumamiriro ezvinhu apo muponesi asingakwanisi kana kuti asingadi kupa muromo-ku-muromo ventilations.
Kuti udzidze zvakawanda kana kukumbira Hands Chete CPR musangano munharaunda yako, ndapota zadza fomu riri pazasi.
Kukumbira Maoko Chete CPR kudzidziswa, ndapota zadza fomu pazasi kana kufonera Prairie's STAT Moyo Hofisi pa 217.788.0706.
Bata Nharembozha *